Global Times သတင်းထောက် ဟောင်ကောင်ဆန္ဒပြသမားတို့၏ ရိုက်နှက်စော်ကားခြင်းခံရ - Yangon Media Group
ဟောင်ကောင်၊ ဩဂုတ် ၁၄
Global Times သတင်း ထောက် ဖူဂိုဟိုသည် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် တရားမ ဝင်ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံရ၍ ဟောင် ကောင်လေဆိပ်တွင် ဆန္ဒပြအကြမ်း ဖက်သမားများက ရိုက်နှက်ခံရ ချိန်မှာ အင်္ဂါနေ့ သန်းခေါင်ယံ အချိန်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဖူဂိုဟိုမှာ Global Times သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်၏ သတင်း ထောက်ဖြစ်သည်။ ၄င်းအား အ ကြမ်းဖက်ဆန္ဒပြသမားများက ဟောင်ကောင်လေဆိပ်တွင် ရိုက် နှက်ခဲ့ကြကြောင်း၊ ゞင်းမှာ သတင်း များ ပေးပို့မှုလုပ်ဆောင်နေစဉ် အ ရိုက်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။
ဖူအား ဆန္ဒပြသမားများက ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ကာ ၄င်းတို့၏ ရုပ်ပုံများအား ရိုက်ကူးထားသည် များကို ပြန်လည်တောင်းယူခဲ့ကြ သည်။ ၄င်း၏အိတ်ကို ဆန္ဒပြသ မားများက ရှာဖွေရာ တီရှပ်တစ် ထည်တွင် “ကျွန်တော် ဟောင် ကောင်ရဲတွေကို ချစ်တယ်” ဟူ သော စာတန်းတွေ့၍ ဆက်လက် ရိုက်နှက်ခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။
ရှေးဦးသူနာပြုများရောက် လာကာ သူ့အား ကူညီပေးခဲ့ကြ သည်ဟုဆိုသည်။ ဆန္ဒပြသမား များက ရှေးဦးသူနာပြုများကို နှောင့် ယှက်ခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။ ယခုအချိန်တွင် ဖူမှာ ဆေး ရုံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေကြောင်း သိရသည်။ ဖူမှာ တစ်ကိုယ်လုံးကျိုး ကြေနေပြီး ဦးခေါင်းတွင် သွေး များထွက်နေကြောင်း သိရသည်။
ဆန္ဒပြသမားများသည် ၄င်း တို့၏ ဖူအား ပြုမူသည့်အပြစ်ကို ပြန်လည်ခံစားသွားရမည်ဟု ဖူဒန် တက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခ ရှင်လီက ပြောကြားလိုက်သည်။ ဖူအား ဟောင်ကောင်ရှိ တ ရုတ်ပြည်မမှ တရုတ်များက ကောင်း ချီးပေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ရက်ပေါင်း ၈၀ အတွင်းမှာ ချစ်သူနဲ့ လက်ထပ်တော့မယ့် နစ်ကီမီနာ့ဂ်ျ
အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြသူများက ဟောင်ကောင်နိုင်ငံတကာလေဆိပ်အား ဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ် သိမ်းပိုက်ထား၊ ရဲများနှင့် အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွား
သာယာဝတီ ထောင်ပြန် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ(Anti Labour) တိုက်ပွဲ ၂၈ နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအန??
”သရုပ်ဆောင်သစ်တွေ၊ ဒါရိုက်တာသစ်တွေကို ပရိသတ်က လက်ခံလာခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ကို အားဖြစ်စေပ?
သြစတြေးလျက သီရိလင်္ကာ လူမျိုးတစ်ဦးကို အကြမ်းဖက်ရန် လျှို့ဝှက်ကြံစည်မှုဖြင့် စွဲချက်တင်
တိုင်ဖွန်း တမ်ဘင် တိုက်ခတ်ခဲ့သော ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို ကူညီရန် မလေးရှားနိုင်ငံ အဆင်သင့်ဖြစ
ငွေအဝင်အထွက် ထိန်းညှိရန် ကစားသမား ၁၃ ဦးအထိ ရီးရဲလ် ရောင်းရနိုင်